Nlegharị anya nke Malaysia na-agbagharị ma na-agagharị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Nlegharị anya nke Malaysia na-agbagharị ma na-agagharị
Njem njem • Akụkọ mkpakọrịta • omenala • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ na -agbasa Malaysia • ndị mmadụ • Iwughachi • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • video
Nleta njem nlegharị anya nke Malaysia dị nchebe dịka onye osote onye isi nchịkwa ya siri kwuo.
Datuk Musa Hj Yusof ga-akọwa etu nke a si arụ ọrụ.
Malaysia njem nleta na ọnọdụ nchekwa, mana ọ pụtaghị na ụlọ ọrụ gọọmentị anaghị arụ ọrụ
Onye osote onye isi na-ahụ maka njem nlegharị anya na Malaysia na-ekwu na ụlọ ọrụ ya na mba ofesi na-agba ma na-agagharị
The World Tourism Network kpọrọ Njem nleta Malaysia na mkparịta ụka mmekọrịta ma enwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ụzọ Malaysias si echepụta iji mepee ụlọ ọrụ njem na njem.
Datuk Musa Hj Yusof bụ Deputy Director-General Tourism maka Malaysia. Na Fraịdee na Network Njem Nleta Ụwa buru otu afọ nke mkparịta ụka njem njem ya n'isi ma kpọọ onye osote onye isi ka o mee ka ndị ndu nke ndị njem njem banyere ụwa dị na Malaysia.
Onye njikwa oge Rudi Herrmann, onye isi oche WTN maka Malaysia Isi kwuru Datuk Musa Hj Yusof bụ nwoke maara, o mekwara.
Nlegharị anya nke Malaysia nọ n'ọnọdụ dị mma n'oge a. Ahụhụ a na-ebo ndị azụmaahịa, na-esoghị ụkpụrụ dị iche iche nke sistemụ nchekwa na mpaghara South Asia a rịrị elu site na $ 200.00 ruo $ 10,000.00. Obere nzukọ ga-ekwe omume ugbu a.
E mechiri ókèala mba ụwa, mana a na-atụle Singapore, Indonesia, Thailand, na Brunei ka ha na-egosipụta ihe ndị na-eme njem.
“Anyị na-ewulite ntụkwasị obi maka njem nke ụlọ. Malaysia bịara na Mgbasa Ozi Dị Ọcha na Nchekwa. Onwebeghị onye nwere nsogbu na COVID-19 na Malaysia. A na-ahụ spikes na ntọala ụlọ ọrụ, mana ọ bụghị na mpaghara njem na njem.
Fgbọ elu na-abịa ma na-apụ ma na mpaghara mpaghara Ọwara, mana na-ebu ọtụtụ gloves roba. Malaysia bụ otu n'ime ndị na-emepụta roba gloves.
Mbadamba njem nlegharị anya nke Malaysia na mba ofesi na-agagharị ma na-agagharị ma na-agba ụkwụ dị ka Datuk si kwuo. Ihe omume gụnyere mkparịta ụka B2B na ịgafe na mgbasa ozi.
Ọtụtụ ndị na-eme ihe mgbasa ozi mmekọrịta na-arapara na Malaysia n'ihi mkparịta ụka wee bụrụ ndị na-ekwuchitere mba ahụ na njem na njem nleta, yana ụlọ ọrụ nri.
Alain St Ange, onye bụbu minista na-ahụ maka njem maka Seychelles gbara mbọ ka iwebata paspọtụ mba ofesi. Datuk Musa Hj Yusof kwetara.
Lelee echiche ya: